I-Google Pixel 2 XL iya kujoyina iklabhu yee-smartphones ezingenamda | Iindaba zeGajethi
I-Google Pixel 2 XL iya kujoyina iklabhu yee-smartphones ezingenamda
Ngaphezulu nje kwenyanga kushiyekile ukwazisa ngokusesikweni isizukulwana sesibini seGoogle Pixel, ukuba ulwazi u-Evan Blass wabhengeza kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo luqinisekisiwe, ukuza kuthi ga ngoku sinolwazi oluncinci olunxulumene nePixel 2 kaGoogle kunye neGoogle Pixel 2 XL. Ngapha koko, amarhe athandwa kakhulu akhomba ngaphakathi kweso sixhobo, ingaphakathi eliza kulawulwa yi-Snapdragon 836, ukuba yi-smartphone yokuqala ukusebenzisa le processor yeQualcomm entsha, eza kuthatha indawo ye-835 engaphakathi kweGalaxy S8 kunye neGalaxy Note 8. Nangona kunjalo, ngokwe-Arena yefowuni, i-Google Pixel 2 XL iya kuba neyantlukwano ebonakalayo xa kuthelekiswa nePixel 2.
Iifablets beziphakathi kwethu iminyaka embalwa ngoku kwaye zilapha ukuze zihlale. Kodwa kule minyaka idlulileyo, uninzi lwabavelisi olo ukugcina, okanye ukwandisa ubungakanani besikrini, izama ukunciphisa ubungakanani ukuya kwelona liphezulu Kwisixhobo. UGoogle akanakuphuma ngaphandle kwale meko iyaphumelela kwaye isizukulwana sesibini sePixel XL siyakuziqhelanisa nale meko yentengiso.
Ngokwe-Arena yefowuni,iGoogle Pixel 2 XL iya kuba sisiphelo esineesentimitha ezi-6 zesikrini kwaye ayisayi kuba nezakhelo. Nangona kunjalo, imodeli ye-5-intshi, iPixel 2, iya kuqhubeka nokugcina uyilo olufanayo nonyaka ophelileyo. Iphaneli yeGoogle Pixel 2 XL iya kuba yi-2k, kodwa okwangoku kwicandelo lokufota, i-terminal iya kuqhubeka nokukhetha ikhamera enye, engaqhelekanga kuzo zonke iiterminal eziphezulu ezikwiimarike, ukuba asenzi njalo uthathe ingqalelo kwi-Galaxy S8.
Enye into entsha esiza kuyiziswa sisizukulwana esilandelayo seGoogle Pixel izithethi ezimbini ngaphambili, Ngoyilo olufana kakhulu nolwanokufumaneka ngoku kwi-HTC U11, into eqhelekileyo xa ucinga ukuba kulo nyaka, inkampani yaseTaiwan ikhethwe kwakhona ukwenza iGoogle terminal. Olunye uhlobo lwesi sizukulwana sesibini lusibonisa indawo enovakalelo kuxinzelelo, apho sinokwenza khona izimbo zomzimba ezahlukileyo eziza kuthi zisinike iimpendulo ezahlukeneyo njengoko besikhe sayilungisa ngaphambili.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » I-Google Pixel 2 XL iya kujoyina iklabhu yee-smartphones ezingenamda
ICanon EOS M100, isipili esitsha esingenasipili esivela eJapan
Malunga ne-200.000 yeeapps ziya kunyamalala kwivenkile yeApple